Global Voices teny Malagasy » Korea Atsimo: Ady seza-na metro eo amin’ireo taranaka tsy mitovy fotoana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jona 2010 12:04 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Fanabeazana, Hevitra, Tanora
Be ny fitarainana momba ny fihetsika maherisetra ataon’ireny zokiolona ireny amin’ny fakàna ireny seza ireny no taterina any anatin’ireo media ao an-toerana sy any anaty blaogy any. Misy ireo zokiolona no manositosika ireo mpianatra efa reraka, olona eo amin’ny 20 na 30 taona eo, ary vehivavy tanora bevohoka mba hiala amin’ilay seza . Maro ireo zokiolona ireo no mandaka ara-bakiteny sy mihaza ireo tanora amin’ny tehina eny aminy mba hialan’ireto farany amin’ny seza . Ny taimbava mandratra atao amin’ireo tanora sy mahatonga azy ireo ho sadaikatra mafy tokoa mandra-pialana amin’ny sezany dia efa zavatra fahita matetika any anaty metro, ny sasany aza moa tonga mihitsy hatrany amin’ny fanozonana ireo reny niteraka satria hoe tsy nampianatra fahalalam-pomba sy fanajana ny zokiolona an’ireo zanany.  Ireny fifandonana ireny, raha sendra manapa-kevitra ny hamaly ilay tanora, dia matetika no mivadika fifampivazavazana eo amin’ny andaniny sy ny ankilany, fifampikasihan-tànana na hatrany amin’ny fandratràna sy fifanenjehana araka ny lalàna ataon’ny media ao an-toerana ambetin-dresaka.
Ny gazety koreana tatsimo Hankook Ilbo dia namoaka ny tatitry ny orinasa mpitantana ny metro ao Seoul  izay mampiseho ny firongatry ny fifanandrinan’ireo zokiolona mitaky ny zony amin’ny fampiasana ny Noyak, sy ireo tanora beloha izay matetika misafidy ny tsy hanome haja.
‘Yoon Tae’ mpitoraka blaogy ao amin’ny Daum ‘  dia nampivoitra fa ireo zokiolona dia ireo nizaka ny fotoana sarotra indrindra nodiavin’ny tantaran’i Korea fony mbola natokana ho ana vondron’olona azo nisaina tamin’ny rantsan-tànana ny fanabeazana maoderna sy sahaza ka ankehitriny izy ireny dia mihevitra ny tenany ho toy ny nahiliky ny fiarahamonina.
Ny filàna maika nisy teo amin’ny Korea Atsimo mba hijoro ho tena firenena sy hifaninana amin’I Korea Avaratra dia niteraka firoboroboana ara-toekarena nampivanaka saiky tamin’ny sehatra rehetra mihitsy, saingy novidiana lafo izany ho an’ny ampahany sasany tao amin’ny fiarahamonina. Hayan111, mpitoraka blaogy ao amin’ny Naver dia nanamarika fa  ny nametrahan’i Korea ny firoboroboana ara-toekarena ho laharam-pahamehana dia nitarika tany amin’ny tsy fijerena ny zon’ny sasany, ary dia miverina mitaky ny toerany eo anivon’ny fiarahamonina ireo beantitra.
Ny fametrahana seza Noyak maro fanampiny dia nanainga fanakianana mivaivay avy amin’ireo tanora vao misondrotra  ary nisy mihitsy aza olona sasany nandroso hevitra ny amin’ny tokony hametrahana fiaran-dalamby natao ho an’ny antitra samirery . Noho ny fifampitankosenana dia toa tsy azo ihodivirana ny fifandirana any anaty metron’ny Seoul.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/06/29/6764/
 vehivavy tanora bevohoka mba hiala amin’ilay seza: http://motherblog.co.kr/21
 mandaka ara-bakiteny sy mihaza ireo tanora amin’ny tehina eny aminy mba hialan’ireto farany amin’ny seza: http://slyslug.egloos.com/3627520
 sasany aza moa tonga mihitsy hatrany amin’ny fanozonana ireo reny niteraka satria hoe tsy nampianatra fahalalam-pomba sy fanajana ny zokiolona an’ireo zanany.: http://cafe.naver.com/ilovecat.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=242551
 Ny gazety koreana tatsimo Hankook Ilbo dia namoaka ny tatitry ny orinasa mpitantana ny metro ao Seoul: http://economy.hankooki.com/lpage/society/201005/e2
 Karsonic, mpitoraka blaogy iray : http://withktx.net/137
 ‘Yoon Tae’ mpitoraka blaogy ao amin’ny Daum ‘: http://blog.daum.net/poet7600/13643217
 Hayan111, mpitoraka blaogy ao amin’ny Naver dia nanamarika fa: http://blog.naver.com/hayan_111?Redirect=Log&logNo=70021408194
 fanakianana mivaivay avy amin’ireo tanora vao misondrotra: http://yuntae.com/120
 nandroso hevitra ny amin’ny tokony hametrahana fiaran-dalamby natao ho an’ny antitra samirery: http://www.journalog.net/27polaris/17085